IZWE | RayHaber | raillynews
[18 / 02 / 2020] IBongo Nenhliziyo Yesitimela Sikagesi Sikazwelonke siphathiswe i-ASELSAN	I-54 Sakarya
[18 / 02 / 2020] Nge Turkey Ungene Memorandum Ukuqonda phakathi Pakistan Railways	I-92 Pakistan
[18 / 02 / 2020] UTemsa Uyathengiswa Futhi! Ngakho-ke Ngubani Ozothenga?	34 Istanbul
[18 / 02 / 2020] WillZTAŞIT Uzophila eBergama	I-35 Izmir
Pakistan-Turkey High-Level Strategic Cooperation Council VI. Umhlangano ububanjelwe e-Islamabad, inhloko-dolobha yasePakistan, ngaphansi kobuholi bukaMongameli Recep Tayyip Erdogan. ISekela likaNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda zomhlangano Weqembu Lokusebenza Kwezothutho owabanjwa ngaphambi koMkhandlu [Okuningi ...]
U-İntek Kalıp ve İskele waba ngumhlanganyeli wezixazululo weDarussalam - i-Morogoro ne-Morogoro - i-Dodoma - Iphrojekthi kaMakutupora Railway eTanzania, owokuqala umzila wesitimela ohamba ngesivinini esikhulu e-East Africa. IDar es Salaam ekubeni idolobha eliyitheku [Okuningi ...]
Inkampani yase China Railways, eyenza izingxenye ezimbili kwezintathu zinethiwekhi yonke yezitimela ezihamba ngesivinini esiphezulu eminyakeni eyishumi edlule emhlabeni, ihlangana neBrithani. Inkampani inkulu kunazo zonke emhlabeni, amakhilomitha angama-10 eNgilandi [Okuningi ...]
Ngo-2017, inkampani yaseFrance i-Alstom yazama ukuhlangana ne-germic enkulu yezimboni yaseGerman. Kodwa-ke, iKhomishini yaseYurophu ivimbele lokhu kuhlanganiswa okuhlongozwe ngonyaka ka-2019. Okusemthethweni kusuka Alstom namuhla [Okuningi ...]
Ngenxa yokuguguleka kwenhlabathi, isitimela esaphethe amathani amakhemikhali edwala saphazanyiswa, isitimela esaphazanyiswa sangena emfuleni, saphindela enkundleni yempi. Ikheli lezithombe elaphazanyiswe isitimela sezimpahla esiwela entabeni e-USA [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Wezabasebenzi kanye Nezokuphepha Kwezenhlalo i-TRNC u-Faiz Sucuoğlu uvakashele ifektri lapho kuzokhiqizwa khona iGünsel, okuzoba imoto yokuqala kagesi yakuleli. Dr. Uthole imininingwane ku-İrfan Günsel mayelana nezifundo. Ministry [Okuningi ...]
ICoronavirus, eyaqala eChina futhi yakhathaza umhlaba wonke, nayo yawuthinta kakhulu umnotho. Ngenkathi izinkampani eziningi zimisa ukukhiqiza eChina, i-Mobile World Congress yakhanselwa. Ukukhanselwa kwengqungquthela kuthinte nezinhlelo ze-TOGG. [Okuningi ...]
Kusungulwe uMyuziyamu Kazwelonke Wezimoto i-GUNCEL, Gunsel Art Museum.
Cishe Imisebenzi engama-20 yeCypriot neTurkey World Awarded Artists izokwenzeka "eGünsel Art Museum", ezovula eNicosia Derebo ngoFebhuwari 700, usuku okuzothuthukiswa ngalo uGünsel. Izwe lakithi kanye naselizweni [Okuningi ...]
Uthole ithenda enkulu yokulungiswa kwenkampani yezitimela yaseNdiya iLarsen neToubro (L&T) i-Etihat Rail. U-Etihad Rail, inkampani yesitimela esemthethweni ye-United Arab Emirates, uphatha izinto zokuhamba nezokuhamba [Okuningi ...]
Isingozi Esisheshayo Sesitimela e-Italiya 2 Esifile 30 Silimele
E-Italy, okungenani abantu abangu-2 bafa kanti abantu abangu-30 balimala ngenxa yokuphazamiseka kwesitimela okuhamba ngesivinini esikhulu. Isitimela esinejubane elikhulu ukusuka eMilan, e-Italiya kuya eSarerno, esiteshini saseLivraga sesifundazwe saseLodi [Okuningi ...]
I-Cengiz İnşaat Isayinwe Isivumelwano Sokwakha Umhubhe weKarawaski weSlovenia
UCengiz İnşaat usayine inkontileka yomgwaqo eyizigidi ezingama-98,5 yomgwaqo wokwakhiwa komugqa wesibili weTarawaski Tunnel ukuze uvulwe yiSlovenia phakathi kweSlovenia ne-Austria. I-Cengiz İnşaat, inkampani enkulu yemigwaqo yaseSloveya DARS 3 [Okuningi ...]
RayHaber I-18.02.2020 Tender Bulletin
Amakhambi avimba i-angle yokubuka yokuhamba okuphephile eKandira asuliwe
WillZTAŞIT Uzophila eBergama